> Resource > Ladnaansho > Siduu u BUSlink Data Recovery
Waxaan ka BUSlink External Hard Drive soo kaban karto, Files?
Hello, waxaan la isticmaalayo ah USB 500GB BUSlink 3.0 SuperSpeed ​​External Hard Drive. Waxaan ku kaydsan qaar ka mid ah videos iyo sawiro ku yaal. Dhawaan ayaan u amaahday si ay saaxiib la ah iyo iyada oo si taxaddar la'aan tirtiray oo dhan oo iyaga ka mid. Sidaas daraaddeed waxaan doonayaa in la ogaado bal inay weli suurtagal ii sameeyaan ay dib u hanato aan videos iyo sawiro? Mahad badan.
Dhab ahaantii, tani ma aha wax dhibaato ah oo aad u xun ilaa iyo inta aad tallaabo degdeg ah qaadaan. Halkan waa runta ku saabsan files tirtiray aad BUSlink drive dibadda u adag, waxay la calaamadeeyay xogta iyo Reebnaan yaa ku wadid aad u adag, oo ay la soo kabsaday karaa inta ay tahay ma overwritten by xog cusub. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay joojiyaan gelinaya macluumaadka cusub si aad drive BUSlink adag iyo raadiyo barnaamijka xogta BUSlink ah si ay kuu caawiyaan.
Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac , aalad awood aad u soo kabsado lumay, tirtiray, formatted iyo faylasha laga aad BUSlink drive dibadda adag. By u isticmaalaya waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano dhammaan noocyada kala duwan ee files ka BUSlink drive adag dibadeed, oo ay ku jiraan video, sawir, file maqal ah, file archive, file diiwaangeliyo oo dheeraad ah.
Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version maxkamad barnaamijkan ah. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad baarista BUSlink drive dibadda adag si aad eegi kartaa inta aad files lumay la soo celin karin.
Qabtaan kabashada xogta BUSlink in 3 Talaabooyinka
Maqaalkani waa mid dadka isticmaala Windows inuu ka soo kabsado xogta ka BUSlink drive adag dibadda. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad samayn kartaa dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah la Mac aad version.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan BUSlink kabashada xogta drive adag dibadda
Sida image hoose, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada ah si ay u bilaabaan. Sida caadiga ah, "lumay Recovery File" mode waa doorashada ugu fiican ee aad ka bogsato xogta ka BUSlink drive dibadda adag.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad BUSlink drive dibadda u adag in la xiran karo your computer.
Tallaabada 2 baarista BUSlink drive dibadda adag tahay in la raadiyo xog laga badiyay
Markaas barnaamijka tusi doono oo dhan qoruhu on your computer, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah si aad u BUSlink drive dibadda adag oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan u baar.
Haddii files ayaa formatted ka BUSlink drive dibadda adag, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka BUSlink drive dibadda adag
Dhammaan files helay on your BUSlink drive dibadda adag lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" iyo "Jidka" qaybood uu furmo suuqa ka dib markii iskaanka.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii faylasha kabsaday dib si aad u BUSlink drive dibadda u adag isla markiiba si looga fogaado in xogta overwritten.